दसैंमा सेतो कोट
दसैमा सेतो कोट
घटस्थापनाको दिन । बिदाको दिन । रमाइलो दिन । दसैं प्रारम्भ हुँदाको तिथि । जमराले अस्तित्व पाउने दिन । खुशीको चाड । उमङको चाड । स्कुल पढ्दाका दिनहरु झल्झल्ती याद आउने कहिलेकसो अचेल ! तम्घासबाट एक दिनको बाटो हिंडेका दिनहरु स्‍मृतिमा अझै ताजा छन् ।
पहाड घर जाँदा सार्है रमाउने मन हुन्थ्यो । रौँदिको उकालो चढ्दा आसिनपसिन हुन्थ्यो । साँझमा घर पुगिन्थ्यो । समय सँगै बिस्तारै बिदा घट्दै गए । हेर्दा हेर्दै घटस्थापनाबाट सर्दै सर्दै सप्तमी कि अस्टमिमा घर जाने दिन आए । जती बिदा कटौती भए पनि देशको प्रगती त उस्तै होला !!
समय बित्दै गए । रितुहरु फेरिदै गए । दसैंहरु आउँदै जाँदै गरे । दसैं त सधैं उस्तै त हो । शरद रितुमा सधैं आउँछ अनि जान्छ पूरा चहलपलसाथ । मेरो लागि न त यो चाड पर सर्छ न त अगाडि । न अरु कसैका लागि । परिवर्तन त केबल आफ्नो अवस्था र परिस्थितीमा हुने रहेछ । ।
बिदाका दिन कट्दै कट्दै अचेल शून्य भएको छ । पहिले पहिले छुट्टीमा घर गइन्थ्यो । अचेल छुट्टीमा घरबाट छुट्टी माग्नुपर्छ ।
“ कहिलेको टिकेट लिइस् त बाबु । “ घरबाट आमाले फोन गर्नुहुन्छ बिहानै । पूरा आशाका साथमा ।
“ छुट्टी मिल्दैन ममी । आउन सकिन्न जस्तो छ । “ म भन्छु । पूरा मलिन स्वरका साथमा ।
“ पाँच दिनको छुटी मिलाउनु जसरी भएपनि । भैरवस्थान जानुपर्छ सपरिवार । धेरै बर्ष भयो जाने भनेको ।” द्रिढताका साथ स्वर सुनिन्छ ।
“ मिल्दैन ममी । छुट्टी भन्ने हुँदैन । काम छोड्न मिल्दैन । नाइट ड्युटि आदि छन् । तिहार र दसैंमा एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छ । “ म आफ्नो अवस्था सुनाउँछु ।
“ मिलाएसी जे पनि मिल्छ । जसरी भएपनि मिलाउनु । “ पूर्ण आदेशसरह सुनिन्छ अब । अब बुझाउन खोजेर सफल भइन्छ जस्तो लागेन ।
“मिल्यो भने आउँछु “ भनेर वार्तालाप मोड्छु । र अरु कुरा गरेर फोन काट्छु । मिल्ने त कुनै हालतमा थिएन ।
दसैं नजिकिँदै गर्दा यो गतिलो जिनिस पढिएछ जस्तो लाग्दैन हरेकबर्ष । चाडपर्व दिन रात भन्न नपाइने तर सबैलाई सानैदेखि चाखलाग्ने जिनिस रहेछ ” डाक्टर “ । रहर लागेर नै पढेको हो । अब जे छ त्यसलाई आत्मसात गर्नुको बिकल्प त छैन।
छोराछोरी डाक्टर भयो भनेर खुशी हुने मनहरु कति धेरै छन् । चाडपर्व आउँदा मलिन हुन्छन् । तर अरुले लगाएको जुत्ता कत्तिको सजिलो छ भन्ने कुरा आँफै नलगाएसम्म बुझ्न् सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । कागजमा मात्रै मिति मिलाएर ड्युटि गर्न नमिल्ने । के गर्नु ? न दसैंको ड्युटि पछि गर्दिन्छु भनेर हुने । दसैंमा नागरिकता नबाँडे पनि हुन्छ । प्रशासन बन्द भए पनि केही फरक पर्दैन । । बैन्क पनि बन्द भए हुन्छ । केही दिन ढिला भएर केही हुँदैन । तर दसैंमा मान्छे बिरामी हुन्नन् भन्ने छैन । सिकिस्त हुदैनन् भन्ने पनि छैन।
अमेरिका भएको छोराछोरीको आशा भन्दा नेपाल भित्रै बढी आशा हुनु स्वाभाबिक नै हो । यति सानो नेपालमा पनि २०० कि मि तय गर्न एक दिन नै लाग्छ । बुलेट ट्रेन हुन्थ्यो त बिहान बेलुका घरबाट आउन सकिन्थ्यो होला । भबिश्यमा कल्पनामा रमाउनु बाहेक अहिले कुनै उपाय छैन ।
सानोमा रामायण र महाभारत धेरै हेरिएछ । त्यसैले कहिले कसो त जादु र चमत्कारले चुट्की भरमा सबै समस्या समाधान गरेको कल्पना गर्न मन लाग्थ्यो । आज पनि मलाई कल्पनामा डुब्न मन लाग्छ । नारद मुनीले श्रीक्रिश्णले त्यति धेरै गोपिनिहरुलाई समय कसरी दिन्छन् त भनेर खोजिनिती गर्दा हरेक गोपिनिसँग एकै समयमा श्रिक्रिष्न पाएका थिए रे । हजारौँ अवतार लिएर सबैसँग एकैसाथ समय ब्यतित गर्न सक्थे रे। भगवान राम पनि सबै प्रजाका घरमा एकैपटक पुग्थे रे। मलाई पनि दुई जना मात्र हुन सके त काम नै फत्ते हुने । आँखा चिम्लिन्छु । ध्यान गर्छु । द्रिढ इच्छा गर्छु । र आँखा खोल्छु । सबै उस्तै छ । म एउटै छु । आँखा चिम्लिदैँमा सिरियलमा जस्तो चमत्कार के हुन्थ्यो र !!
............. “ के छ बाबु । आउने भइस् । “ बुवाको फोन आउँछ ।
“ उम् । आउन सकिन यसपटक । पेशा नै त्यस्तै पर्‍यो । “ म भन्छु बाध्यता झल्काउँदै ।
“ त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ । यतिका महिना भइसक्यो । दसैंअंा त आउन पर्‍यो । ब्यक्तिगत जीवन मिलाउन नसके त सन्तुलन बिग्रिन्छ । “ दिब्यज्ञान दिन खोज्दै हुनुन्छ बुवा ।
ब्यक्तिगत जीवनको स्वाद कस्तो हुन्छ ! तीन बर्ष भइसक्यो त्यती मजाले चाख्न पाएको छैन । खानाको सन्तुलन मिलाउन त हम्मे हम्मे हुन्छ ।
“ अब नमिल्ने कुरामा के कुरा गर्नु । ९९ प्रतिशत म आउन सक्दिन ,बुवा । आदि........ “ म भन्छु निराशाका साथ । .."........... ।
यी कुराहरु सोच्दै थिएँ । सम्झना हुन्छ झट्ट । आज त मेरो मनप्रिय साथी प्युठान जान लागेको दिन । स्वास्थ्य शिबिर सन्चालन गर्न र घुम्न । उनलाई भनेको त थिएँ हिंड्ने बेला कल गर्नु भनेर । शायद उनले बिर्सिछन् होला । मैले अलिक ढिला सम्झिएँ । उत्त्निखेर कल गर्ने प्रयास गरे । टावर लागेन । अनि मेसेज गरेँ ” शुभ यात्रा । “ हिंड्ने बेलामा प्रार्थना र शुभकामना गर्‍यो भने भगवानको खातामा पुग्छ रे सुरक्षाको जिम्मा । जे होस् मैले मनबाटै प्रार्थना गरेँ ।
फिल्टर भएर बचेको थोरै मूल्यवान समयको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर चिन्तन गर्छु बेलामौकामा । अन्तर सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ला भन्ने सोचले मनप्रिय साथीलाई सम्झिएँ । उनी पनि ब्यस्त छिन् अचेल । फिल्टर भएको समयमा मलाई कतै अटाउँछिन भन्ने आस छ । इष्टमित्रलाई सम्झिएँ । शुभकामनाका शब्दहरु उपहारस्वरुप पठाएँ । शब्दहरुमा खेल्ने प्रयास गर्दै छु । कनिकुथी शब्दहरु टपक्क टिपेर लेख्ने प्रयास गर्दै छु । । यसपटक दसैंमा म रमाउँदै छु । कलम ,आला, सेतो कोटका साथमा । समयसँगै बोध हुँदैछ ” मानव सेवा नै भगवानको सेवा । “
बिजया दशमीको शुभकामना ।
Dear friend , Bikas , Archimedes and Narayan Gopal
Five rupees note outside ICU